Madaxa Aamin Ambulance oo xaqiijiyey in Boolisku ku wargeliyeen inay shaqada joojiyaan | Puntlandes.com
Madaxa Aamin Ambulance oo xaqiijiyey in Boolisku ku wargeliyeen inay shaqada joojiyaan
10 April 2019 (Puntlandes) Madaxa Gaadiidka Gurmadka degdega ee Aamin Ambulance Dr. C/qaadir C/raxmaan Xaaji Aadam ayaa xaqiijiyay in amar ka soo baxay Booliska Gobolka Banaadir lagu amray inay joojiyaan shaqada, taasoo uu ku tilmaamay arrin aan wanaagsaneyn.
Dr. C/qaadir oo wareysi siiyay telefishinka BBC Somali ayaa sheegay in Booliska ay hadal ahaan ugu wargeliyaan inay shaqada joojiyaan, isla markaana aanay tagi karin goobaha qaraxyada ka dhacaan oo ay inta badan ka qaadaan dhibanayaasha iyo dadka ku waxyeelooba qaraxyada.
“12 Sano ayay Aamin Ambulance shaqeyneysay oo ay khibrad heysataa, wax dhibaato ah oo laga sheegtay ma jirto inay dadka u gargaarto mooyee, waxaa Booliska na fareen inaan joojino shaqada, waana u hoggaansanay”ayuu yiri Dr. C/qaadir C/raxmaan.
Mar uu ka hadlayay hadal ka soo yeeray Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada oo ahaa in gaadiidka Gurmadka degdega loo adeegsan karo qaraxyada, sida ka dhacday caalamka ayuu ku tilmaamay hadalkaas inuu yahay war dhiilo leh in la yiraahdo gaadiidka gurmadka ayaa la isku qarxiyaa ama la adeegsanayaa, isagoo tilmaamay in marar badan ay dhacday baabuurta ciidamada loo ekeysiiyo in weeraro lagu fuliyo, xitaa dharka Ciidamada.
“Amarka nala siiyay wuxuu ahaa inaan shaqada joojin oo hadal ahaan Booliska nagu dhaheen, in meelaha qaraxyada ka dhacaan aanan tagi karin, markii aan ka codsanay warqad in nala siiyo waxay dhaheen warqad nalooma keenin”ayuu yiri Madaxa Gaadiidka Aamin Ambulance.
Hadalka ka soo yeeray Madaxa Aamin Ambulance ayaa meesha ka saaraya hadalkii Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada oo u muuqday inuu ahaa mid marin habaabin ah, kuna dafirayay in wararka sheegaya in laga joojiyay shaqada Gaadiidka Gurmadka degdega ah.